ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အမှာစကားလေးတစ်ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အမှာစကားလေးတစ်ခု
Posted by kanjosan on Jan 16, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Politics, Issues |7comments
ဒီတိုင်းပြည်မှာ လွတ်လပ်တဲ့အခါမှာလည်း ယိုးဒယားပြည်လို ဖြစ်ချင် သလား။ တူရကီပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား။ အိုင်ယာလန်ပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား။ ယူနိုက်တက်စတိတ်(အမေရိကန်)လို ဖြစ်ချင်သလား။ အင်္ဂလိပ်ပြည်လို ဖြစ်ချင် သလား။ ဆိုဗီယက် ယူနီယံလိုဖြစ်ချင်သလား။ ဖြစ်ချင်တာတွေအပေါ်မှာ မှီပြီး တော့ ခင်ဗျားတို့ အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောပြချင်တယ်။ အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ တော့ မဖြစ်ဘူး။ . . . ”
has written 30 post in this Website..
View all posts by kanjosan →
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းတွေကတခွန်းဆိုတခွန်းမှတ်သားလောက်စရာချည်းပဲ။ ဦးစောမောင်ပြုတ်ခါနီးတုန်းကနောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းကတော့”ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ထဲလိမ်မော်သီးထဲ့ရင်ဘယ်နှစ်လုံး ၀င်မလဲသိလား” တဲ့။ သမိုင်းဝင်ပဲနော်။
ဟုတ်တာပေါ့ … ထိုင်နေလို့တော့ ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး … ။ ဒါပေမယ့်လည်း …. လုပ်သင့်ဖြစ်သင့်တာကို ဦးဆောင်မယ့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှု့ကလည်း အရေးကြီးသေးတယ်လေ …… နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့ကတော့ … မိမိပေါ်မှာသာ မူတည်နေပါတယ် … ။
သိပ်မှန်တဲ့ စကား ၊ “ အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ တော့ မဖြစ်ဘူး ”
“ ထိုင်နေရင်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်သွားတာ ကြက်မတွေဘဲ ရှိတယ် ” လို့ တာရာမင်းဝေ ကလည်း ရေးခဲ့ပါ၏
ကိုမောင်ပေ ရေ ဟုတ်ပါပေ့ဗျာ။ဆရာတာရာမင်းဝေ ပြောတာလေးကလဲ သွေးထွက်အောင်မှန်ပြန်ရောဗျို့ ။
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ရောက်ဖို့ သိပ်မလိုတော့ဘူးနော်။
Kyithur Tun says:
ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ စကား ကသိပ်မှန်တာပဲ ကိုယ်ကဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ ဟိုနိုင်ငံလိုတိုးတက်ချင်တယ်ဒီနိုင်ငံ လိုတိုးတက်ချင်လို့ ဘယ်ရမလဲ။
“Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.” John Fitzgerald Kennedy quotes (American 35th US President (1961-63)
အဲဒီအပေါ်က.. ကနေဒီမိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်လေးနဲ့.. တွဲလိုက်ရင်.. အင်မတန်အဓိပါယ်ရှိသွားတယ်..။
အင်း ဗဟိုနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ် မှာ ရေလဲနဲ့သုံးခဲ့တဲ့ ဝေါဟာရစကားစုပါ။ နိုင်ငံတော်ကမင်းအပေါ်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းထက် မင်းကနိုင်ငံတော်အပေါ်အကျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုမေးပါ…တဲ့။ မြင်ရသလောက်တော့ လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာ ဒီလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောကြသူတွေ က ပဒုမ္မာ တို့ မေတ္တာမွန် တို့က ကုန်ပစ္စည်းတွေ ရကြပြီး Mazda 323 လို ကားကို အရောင်ကာလာ ကိုဦးအောင်သွားထုတ်ကြတဲ့အခွင့်ရေးတွေရခဲ့ကြတဲ့ ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်ကြီးများကြောင့်လဲ နိုင်ငံကရစရာမရှိအောင်ဆင်းရဲသွားကြတာဘဲလေ။ သွားလေသူ ဗနတရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးဟောင်းလဲဖြစ်၊ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်လဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ အန်ကယ် ဦးတင်အေးကိုသွားမေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်ပေတံနဲ့တိုင်းမလဲလို့။ န၀တ/နအဖ ခေတ်ရောက်တော့ အရင် မဆလခေတ်က ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေက သြချရလောက်အောင်တောင် လက်ဖျားခါရလောက်အောင်တောင် လက်ရဲဇက်ရဲကြတာ တိုင်းသိပြည်သိလေ။ ယခင်ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်ကြီးများက ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ယှဉ်လိုက်တော့ saint ရဟန္တာတွေတောင်ဖြစ်နေပါပေါ့…။